मेस्सी र रोनाल्डोले वर्ष खेलाडिका लागि को-कोलाई भोट गरे ? | Hamro Khelkud
मेस्सी र रोनाल्डोले वर्ष खेलाडिका लागि को-कोलाई भोट गरे ?
लण्डन (एजेन्सी) – फिफा ‘द वेस्ट‘ अवार्डमा वर्ष खेलाडिका लागि रियल म्याड्रिड र पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बाजी मारेका छन् भने बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सीले गत वर्षझैँ सो विधामा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । तर वर्ष खेलाडिका लागि मेस्सी र रोनाल्डोले एक–अर्कालाई आफ्नो पहिलो तीन रोजाईमा छनोट नै गरेका थिएनन् ।
यस अवार्डका लागि हरेक देशका कप्तान र प्रशिक्षकले शीर्ष तीन खेलाडि रोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अर्जेन्टिना र पोर्चुगलको कप्तानका रुपमा मेस्सी र रोनाल्डोले पनि आफ्ना यस वर्षका शीर्ष तीन खेलाडि रोजेका थिए ।
तर मेस्सीको शीर्ष तीन रोजाईमा रोनाल्डो परेनन् भने रोनाल्डोको रोजाईमा मेस्सी पनि परेनन् । मेस्सीले एक नम्बरमा बार्सिलोनाका फरवार्ड लुइस स्वारेजलाई राखेका छन् भने आन्द्रेस इनिएस्टा र पूर्व बार्सिलोनाका खेलाडि नेयमारलाई क्रमश: दोस्रो र तेस्रो स्थानमा राखेका छन् ।
मेस्सी जस्तै रोनाल्डोले पनि आफ्ना रोजाईमा रियल म्याड्रिडका साथीहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । रोनाल्डोले मिडफिल्डर लुका मोड्रिचलाई पहिलो स्थानमा राखेका छन् । त्यस्तै डिफेन्डर सर्जियो रामोसलाई उनले दोस्रो तथा मार्सेलोलाई तेस्रो नम्बरमा राखेका छन् ।
मेस्सी र रोनाल्डोले एक–अर्कालाई भोट नगर्नु कुनै आश्चर्य भने होइन । फिफा बलोन डि‘ओरमा पनि मेस्सी र रोनाल्डोले एकअर्कालाई भन्दा आफ्ना क्लब वा देशका खेलाडिहरुलाई नै भोट दिएको पाइएको छ ।